ထူးခြားချက် ထုတ်ကုန် ထုတ်လုပ်သူနှင့် ပေးသွင်းသူများ - China Feature Products Factory
အမြန်စားနပ်ရိက္ခာသေတ္တာ ထုပ်ပိုးခြင်းစက် အလိုအလျောက် နိုက်ထရိုဂျင် ဖြည့်ခြင်း အလုံပိတ်ထုပ်ပိုးခြင်း စက် မြန်နှုန်း- 3-4 အပိုင်း/မိနစ် အထွက်- 720-960 ပုံး/နာရီ ထိန်းချုပ်မှုစနစ်- PLC ထိန်းချုပ်မှို- အပေါ်နှင့် အောက် ပေါင်းစပ်ထားသော အလူမီနီယမ်အလွိုင်းမှိုများသည် မြင့်မားသော ခိုင်ခံ့မှုနှင့် သံချေးတက်မှု ခံနိုင်ရည်ရှိမှု၊ အစားအသောက် တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှု လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီခြင်း။ထုတ်ကုန်ဖွဲ့စည်းပုံ 1. ဂီယာပစ္စည်း- သန့်စင်သော SUS304 သံမဏိ၊ အကာအကွယ်ပြားအထူ 1.5 မီလီမီတာ၊ အလူမီနီယမ်အလွိုင်း 2. AirTAC ဆလင်ဒါများ၊ အနုမြူ အဆို့ရှင်များ။3. AirTAC Solenoid Valveအစားအသောက်အဆင့် လစ်လပ်...
Full Auto Mechanic Drive လွယ်ကူသော Package Sanitary Napkin စက်
Full Auto Mechanic Drive Easy Package Sanitary Napkin Machine 1.Backsheet Waterproof ပြင်ပရုပ်ရှင်။အထည်နှင့်တူသောအကျိုးသက်ရောက်မှုအတွက် poly နှင့် nonwoven non-woven lamination တို့ကို ရရှိနိုင်ပါပြီ။2. နေရာချထားသောကော်ကိုဖုံးရန် Paper Siliconed ဖလင်ကိုထုတ်ပါ။၎င်းသည် pad ကဲ့သို့ရှည်သည် သို့မဟုတ် ပိုတိုနိုင်သည်။အတောင်ပံများကို ထားရှိရာတွင်လည်း အသုံးပြုသည်။3. Embossing Decorating crimping or engraving functions with two functions- a) topsheet နှင့် internal layer အကြား ရင်းနှီးသော ဆက်သွယ်မှုကို ခိုင်ခံ့စေခြင်း b) အသုံးပြုမှု ပုံသဏ္ဍာန်ကို တိုးတက်စေသည်။4. Acqu...
အီလက်ထရွန်းနစ် Forklift Semi-automatic Electric Drum Flip Truck
အီလက်ထရွန်းနစ် Forklift Semi-automatic Electric Drum Flip Truck 1. Snap ခလုတ်အမျိုးအစား၊ 55 ဂါလံသံမဏိဆီဒရမ်များနှင့် 200L ပိတ်ထားသော ပလပ်စတစ်ဒရမ်များကို ကိုင်တွယ်ခြင်းနှင့် တွဲတင်ခြင်းအတွက် သင့်လျော်သော၊2. အရည်အသွေးမြင့် ဟိုက်ဒရောလစ်ပန့်စခန်း၊ အားကောင်းသော ပါဝါ၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကင်းသော ဘက်ထရီ၊ ကြာရှည်ခံသော ပါဝါကို ရွေးချယ်ပါ။3. အထူးလှိမ့်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဖြင့်ပြုလုပ်သော C-shaped gantry သည် ခိုင်ခံ့ပြီး ဘေးကင်းပါသည်။4. လျှပ်စစ်ရုတ်သိမ်းခြင်း၊ လူကိုယ်တိုင် လမ်းလျှောက်ခြင်း၊ အဆင်ပြေပြီး လက်တွေ့ကျသော Load: 500KG Lifting height: 1.5mm ယာဉ်အမြင့်: 2080mm Caster Specific...
ကော်တံဆိပ်တပ်ခြင်းစက် ပုလင်းအဝိုင်း ပုလင်းစွပ်တံဆိပ်ကပ်ခြင်းစက် လျှောက်လွှာ၏ နယ်ပယ်- ၎င်းသည် ပုလင်းဝိုင်း၊ ပုလင်းပြား၊ စတုရန်းပုလင်းများ၊ အကွေးပုလင်းများ၊ ခွက်များနှင့် အခြားထုတ်ကုန်များတွင် အစားအသောက်နှင့် အဖျော်ယမကာ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ၊ နေ့စဉ် ဓာတုဗေဒနှင့် အခြားထုတ်ကုန်များအတွက် သင့်လျော်သော ဘက်စုံသုံး အလိုအလျောက် လက်စွပ်တံဆိပ်ကပ်သည့်စက်ဖြစ်သည်။ အပေါ့စားစက်မှုလုပ်ငန်း။နည်းပညာဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်- ပါဝါ (kw): 2.0 ဗို့အား (v): 220v AC ထုတ်လုပ်မှုအမြန်နှုန်း (b/min): 150—300 အသုံးပြုနိုင်သော ပုလင်းအချင်း (mm): Φ38—Φ120 အသုံးပြုနိုင်သော တံဆိပ်အရှည် (မီလီမီတာ) : 3...
စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး စက်ရုံမှ တိုက်ရိုက်ရောင်းချသည့် Cooling Tower အအေးခံစက် ဆီအမျိုးအစား Screw Chiller MODEL (m³H) FLOW TOWER DIMENSION (MM) FAN DIAMETER (kw) MOTOR DRY WET DIAMETER (H)HEIGHT RX-10 7.8 930 1740 64835 90. 15 11.7 1070 1630 635 0.37-6P 545 0.37-60 0.550 0.550 0.55-60 0.55-60 0.55-60 970 0.55-60 0.75-60 0.75-60 0.75-60 96 500 RX-30 23.4 1666 530 RX-40 21.2 1660 2050 930 1.50-6P 130 550 RX-50 39.2 1880 2250 930 1.50-6P 190...
ပြောင်းအညှာကောက်ရိတ်စက် ဂျုံပဲပုတ် ချည်ကြံမြက် Forage Harvester ကိုယ်တိုင်တွန်းကန်ထွန်စက် စိုက်ပျိုးရေးစက်
Multifunctional Corn Stalk Harvester ဂျုံပဲပုပ် ချည်ကြံမြက် Forage Harvester ကိုယ်ပိုင်တွန်းကန်ထွန်စက် စိုက်ပျိုးရေးစက် ထုတ်ကုန်ဖော်ပြချက် ၎င်းသည် ပြောင်းဖူးနှင့်ပတ်သက်သော အစိမ်းရောင်သိုလှောင်ကိရိယာတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး မြင့်မား၍ကြမ်းသောပြောင်းဖူးရိုးတံများကို ခုတ်ထစ်ဖျက်စီးနိုင်သည်။ပြောင်းဖူးရိုးတံသည် ဖျော်ရည်ကြွယ်ဝသည်။ကြိတ်ချေသည့်ကိရိယာသည် အာဟာရဓာတ်ဆုံးရှုံးမှုကို ထိထိရောက်ရောက်လျှော့ချရန် မြင့်မားသောနည်းပညာကို အသုံးပြုထားသည်။၎င်းသည် မွေးမြူရေးတောင်သူအများစုအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော အစိမ်းရောင်အစာချက်သည့်စက်ဖြစ်သည်။စိတ်ကြိုက်အစီအစဉ်...
စက်ရုံမှ တိုက်ရိုက်ရောင်းချသည့် ဆလင်ဒါတစ်လုံးတည်း လေးဘီးတပ် ပြောင်းဖူးအသေးစား ရိတ်သိမ်းစက် သုံးတန်းပြောင်း ရိတ်သိမ်းခြင်း ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက် ကောက်ရိတ်စက်တွင် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အစာပုံးပါရှိသောကြောင့် စပါးအစာထရပ်ကားထဲသို့ ချောမွေ့စွာ လောင်းထည့်နိုင်စေရန် စက်ရုံမှ တိုက်ရိုက်ရောင်းချမှုတစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ မူလကောက်ရိုးစုဆောင်းသူ၏အခြေခံဖြင့် ဆင့်ပွားဆန်းသစ်တီထွင်မှုတစ်ခုကို ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ကောက်ရိုးကို အလိုအလျောက် ထပ်မံချေမှုန်းရန်အတွက် ကောက်ရိုးကို ထပ်မံချေမှုန်းရန် ဆင့်ပွားကြိတ်စက်ကို ပေါင်းထည့်ကာ ကောက်ရိုးမှုန့်ကို ပိုမိုနေရာယူလာစေသည်။ချိန်ညှိရန် ဟိုက်ဒရောလစ်ဆလင်ဒါကိုလည်း သင်ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။
အစားအစာထုတ်လုပ်မှုလိုင်း ထုပ်ပိုးခြင်းအတွက် အဆင်သင့် အစားအစာ သန့်ရှင်းရေးနှင့် အခြောက်ခံခြင်းလိုင်းကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သော စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် Tinplate Washer လုပ်နိုင်သည်
စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သော စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် Tinplate စည်သွပ်ဘူး အစားအစာ သန့်စင်ခြင်းနှင့် အခြောက်ခံခြင်း လိုင်းအတွက် အစားအစာ ထုတ်လုပ်ရေးလိုင်း Can Washer ထုတ်ကုန် ဖော်ပြချက် ဗို့အား 380V, 50Hz ပါဝါ 5.15kw ကွန်ဗယ်ယာကြိုး 304 သံမဏိ ကြိုးကွက် ကြိုးပတ် Conveyor belt အကျယ် 800mm Water capacity 1.5m³ ပထမအကြိမ် အကြိမ်ရေ ပြောင်းလဲနိုင်သော အကြိမ်ရေ ချိန်ညှိနိုင်သော လုပ်ငန်းစဉ် -အဆင့်ရေပူသန့်စင်ခြင်း (သန့်စင်ဆေးထည့်နိုင်သည်) → ဒုတိယအဆင့် သန့်ရှင်းသောရေကို သန့်စင်ခြင်း → လေအခြောက်ခံခြင်း အကျဉ်းချုပ် စက်ပစ္စည်းဟော့ဝပ်မိတ်ဆက်...
စက်ရုံမှ တိုက်ရိုက်ရောင်းချသော ဆီဖိစက်သည် အလွန်သက်သာသော ဆီဖိစက် Rapeseed Oil Press ဖြစ်သည်။
အလိုအလျောက် canola ဆီစက်များနှင့် စက်ကိရိယာအစုံအလင်သည် အဓိကအားဖြင့် အလိုအလျောက် အစာကျွေးစနစ်၊ ဆီနှိပ်စနစ်၊ နှိပ်ခန်းအပူပေးစနစ်၊ အလိုအလျောက် အပူချိန်ထိန်းစနစ်နှင့် ဖုန်စုပ်ဆီစစ်ထုတ်စနစ်တို့ ပါဝင်ပါသည်။ဘက်စုံသုံးဝက်အူဆီဖိစက်များ၏ အလိုအလျောက် အစာကျွေးသည့်စနစ် လုပ်သားကုန်ကျစရိတ်၊ ဖိခန်းအပူနှင့် အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်သည် လည်ပတ်ရလွယ်ကူစေပြီး ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော အသုံးချမှုအကွာအဝေးရှိကာ ၎င်းသည် ဆောင်းရာသီ သို့မဟုတ် အလွန်အမင်းတွင် ပုံမှန်အတိုင်း လုပ်ဆောင်နိုင်ဆဲဖြစ်သည်။